Ogaden News Agency (ONA) – Norway: Shirkii Xubnaha Jaaliyada S. Ogadenya oo Guul ku dhamaaday
Norway: Shirkii Xubnaha Jaaliyada S. Ogadenya oo Guul ku dhamaaday
Posted by ONA Admin	/ April 27, 2014
Oslo: Waxaa maanta ka dhacay wadanka Norway caasimadiisa Oslo, shirkii xubnaha Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya ee ku dhaqan Oslo iyo aggagaarkeeda. Shirkan ayaa waxaa marti-sharaf ahaan xubnaha kala soo qeyb galay Marwo Sahra Ismaaciil.
Shirkan oo lagu furay aayado kamid qur’aanka kariim ka ah, ayaa Ajandaha a lagu soo bandhigay hawlihii maamulka qabteen ilaa iyo egga iyo qorshaha maamulka Jaaliyaddu higsanayo dhawrka bilood ee soo socda.
Shirka waxaa warbixinno khuseeya qeybaha kala duwan ee Jaaliyadda kulanka kusoo bandhigay Gudoomiyaha Jaaliyadda Norway, Mudane Abdishakuur Cali Budul oo xubnaha warbixino ballaadhan ka siiyay hawgalladii ugu dambeeyay ee jaaliyaddu kaga qeyb gashay Mudaaharaadkii Geneve iyo kulanadii kala duwanaa ee maamulku la yeeshay xubnaha gobollada Norway, goboladiisa ku kala nool ee Jaaliyadda ku xidhan.
Shirkan oo aad loogu riyaaqay sidii loo soo qabanqaabiyay iyo agaasinkiisiba, ayaa wuxuu ku dhammaaday jawi farxad leh iyo rajo wanaag aad u sareysa oo laga qabo sanadkan inta ka hadhsan in Jaaliyaddu gaadho guulo waaweyn.
Ugu dambeyntiina shirka ayaa lagu soo gabagabeeyay cambaareyn ballaadhan oo loo soo jeediyey gumeysiga Itoobiya, falalka xaq darrada ah ee ay kula kacayaan shacabka Soomaalida Ogaadeenya, kuwaas oo kasoo horjeeda qawaaniinta iyo shuruucda caalamiga ah.